Vaovao momba ny fitaterana an-dalamby
Ankara Metropolitan ben'ny tanàna Mansoor Mahari, Torkia ny fampiharana finday voalohany Smart City "Renivohitra Mobile" fampiharana nizara ny vahoaka. Ho an'ny fivoriana fanambaràna izay natao tao amin'ny efitrano fivorian'ny Kaominaly Metropolitan; mpanao lalàna, ben'ny tanàna, fiarahamonim-pirenena [More ...]
Hitombo ny fivezivezena any Marmaray noho ny fitakiana be. Ny fitomboana voalohany dia eo anelanelan'i Maltepe sy Zeytinburnu. Noho ny habetsaky ny mpandeha dia mikasa ny hampitombo sidina any Marmaray izy. Maltepe-Zeytinburnu no kendrena voalohany amin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa ary ny TCDD Tasimacilik. [More ...]
AnkaraKart dia karatra fitaterana an-tanàn-dehibe izay ho entinao miaraka aminao. Ireo karatra hendry tsy afaka mifandray amin'ny alàlan'ny fampitana azy ireo akaiky ny fitaovana famakiana karatra any amin'ireo fiara fitateram-bahoaka rehetra mifandraika amin'ny EGO sy ny famakiana karatra eo an-tampon'ireo fitaovana ireo. [More ...]